Vondrona mpikatroky ny fanandramana fanandramana
Famaritana ny vondrona experimental
Ny vondron'ny fanandramana amin'ny fanandramana ara-tsiansa dia ny vondrona misy ny fepetra fanandramana. Ny fari-piadidiana tsy miankina dia niova ho an'ny vondrona ary ny valiny na ny fanovana ao amin'ny fari-piadidiana miankina dia voarakitra. Mifanohitra amin'izany, ny vondrona izay tsy mahazo ny fitsaboana na ny fifandanjana tsy miankina dia atao hoe ny vondrona mpitantana .
Ny tanjon'ny fananana vondrona fakan-kevitra sy fanaraha-maso dia ny fananana tahirin-kevitra ampy hahazoana antoka fa ny fifandraisana eo amin'ny fari-piadidiana mahaleotena sy miankina dia tsy vokatry ny vintana.
Raha manao fanandramana momba ny lohahevitra iray ianao (miaraka amin'ny tsy fitsaboana) na amin'ny foto-kevitra iray ara-panandramana sy ny lohahevitra mifehy anao dia manamafy ny fahatokisanao ny vokatra. Ny lehibe kokoa ny habeny, ny azo inoana kokoa fa ny vokatra dia mampifandray ny tena marina.
Ohatra avy amin'ny vondron'ny mpandinika
Azonao atao ny mangataka ny hamantatra ny vondrona mpitsabo amin'ny fanandramana sy ny vondrona mpitantana. Ity misy ohatra iray momba ny fanandramana sy ny fomba hilazana amin'ireo vondrona manan-danja roa ireo .
Andeha hojerentsika hoe te hahita ve ianao raha misy fanampiana ara-tsakafo manampy ny olona very. Te-hanamboatra fanandramana hanamarina ny vokatra ianao. Ny fanandramana mahantra dia tokony haka fanampiny ary hijerena na tsia. Nahoana no ratsy izany? Manana teboka iray fotsiny ianao! Raha tsy matavy ianao, dia mety ho antony hafa. Ny fanandramana tsaratsara kokoa (na dia mbola ratsy be aza) dia ny handray ny fanampiny, jereo raha mahavaky lanjany, mijanòna haka ny fanampiana ary jereo raha mitsahatra ny fahabangan-danja, ary raiso indray izy ary jereo raha mitombo ny fahavoazana.
Ao amin'io "experiment" io ianao no tarika mifehy raha tsy mandray ny fanampiana sy ny vondrona mpitsabo rehefa mandray izany ianao.
Fanandramana mampihoron-koditra noho ny antony maro. Ny olana iray dia ny lohahevitra iray ihany no ampiasain'ny tarika mpitantana sy ny vondrona experiential. Tsy fantatrao, rehefa miala amin'ny fitsaboana ianao, dia tsy misy vokany maharitra izany.
Ny vahaolana dia ny mamolavola fanandramana amin'ny sehatra fanaraha-maso tena marina sy vondrona experiential.
Raha manana vondron'olona marobe izay mandray ny fanampiana sy vondron'olona tsy manao izany ianao, ireo izay miharihary amin'ny fitsaboana (maka ny fanampiana) dia ny vondrona mpitsabo. Ireo izay tsy mandray izany dia ny vondrona mpitantana.
Fomba fitenenana ny fitantanana sy ny fanandramana ara-pitsarana
Amin'ny toe-javatra tsara indrindra, ny singa rehetra izay mahakasika ny mpikambana ao amin'ny tarika mifehy sy ny vondrona mpitsabo dia mitovy amin'ny iray, afa-tsy ny iray - ny fari-piadidiana tsy miankina. Amin'ny fanandramana fototra iray, mety ho zavatra na misy na misy izany. Present = experimental; absent = control.
Indraindray, sarotra kokoa ny fifehezana ary "ara-dalàna" ny fanaraha-maso ary "tsy ara-dalàna" ny vondrona experiential. Ohatra, raha tianao ho hita raha misy fiantraikany amin'ny fitomboan'ny zavamaniry ny haizina. Ny vondrona misy anao amin'ny fitantanana dia mety ho zavamaniry eo ambanin'ny toe-javatra mahazatra isan'andro / alina. Afaka manana vondrona traikefa vitsivitsy ianao. Ny andian-zavamaniry iray dia mety ho tratran'ny alim-be mandrakizay, fa ny hafa kosa mety ho tratran'ny haizina mandrakizay. Eto, ny vondrona rehetra izay miovaova amin'ny fari-piainana dia vondrona mpitsabo. Samy andiam-panandramana ara-panandramana avokoa na ny tariby matevina sy ny maizina rehetra.
Ohatrinona ny oksizenina no mamokatra ny hazo iray?
Ny tatitra momba ny hydrochloride ammonium
Hypothesis, Modèle, Theory & Lalàna
Manova Kilometatra ho an'ny Mpitsidika
Mety tsy ho sasatry ny matory ve ny atidohanao?
Ny fepetran'ny kilema ara-tsiansa tokony ho fantatrao
Moa ve ny varo-dratsy ara-batana ao amin'ny orana?
Ahoana no nahatonga ny fasika karbona?
Ianaro hoe nahoana ny tongolo no manandratra anao
WIMPS: Ny Vahaolana Amin'ny Mistery Matetika?
Wrestler Win-Loss Records ao amin'ny Series Survivor
Ahoana ny fomba hampivoarana drafitra fianarana maotina amin'ny GMAT
Mampiasà globe miaraka amin'ny rakitra
Avaratry ny Central Central College
Zaha Hadid, vehivavy voalohany nahazo ny loka Pritzker
Ahoana ny fomba ampiasana ny Quantum levita
Fampidirana ny New Urbanism sy TND
'Minitra mba hahazoana azy' Penny Sling Game
Fiantohana ny fiaramanidina mitaingina miaraka amin'ny kodiarana 650B
Mpanakanto iraikambinifolo mitondra ny lova navelan'i Nina Simone
Ny vanim-potoanan'ny Tantara Amerikana 1871-1875
Ny fomba fijery Ejiptiana momba ny fahafatesana sy ny piramidin'izy ireo
Momba ny Color Therapy sy ny sainao Auric
CMYK Tsy Kitapo Kilonga ho an'ny Sary hosodoko
3 Mitantara ny lalao Improv izay manatsara ny fahaizan'ny mpandray anjara
Homology vs. Homoplasy ao amin'ny siansa evolisiona
Ahoana no fomba hilalao ny Beta Murphy amin'ny Golf
Ny biography of Brian Cox
Ny ady tao Ypres tamin'ny 1915 dia nahafaty olona 6000 maty
Ady lehibe faharoa: USS Tennessee (BB-43)
Ny Interpretation Copenhague an'ny Mechanica Quantum
Ireo rehetra momba ny sokatra amoron-dranomasina leatherback
Perimeter Worksheets: Classroom Geometry
Manaova sarina soavaly hita ao anaty pensilihazo
Hatshepsut: Lasa vadin'i Farao any Ejipta izy
Tantara momba ny soavaly - Toeram-ponenana sy tantaran'ny tranombakoka Equus